ရှာဖွေတွေ့ရှိခံရခြင်းမရှိဘဲစောင့်အရှောက်များနှင့်ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုကြည့်ရှုခြင်း • Apricots®
ယခုတပတ်ငါသည်ငါ့ခမည်းတော်သည်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများကြည့်ရှုကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်များ၏စာမျက်နှာများ၏ဓာတ်ပုံများကိုစစ်ဆေး ဘာစီလိုနာအတွက်ကြိမ်ဖန်များစွာသွားရောက်သူကိုစောင့်အရှောက် ။ ငါ့အဘို့ကထူးဆန်းဘာမျှမယ့်, ငါသည်လိင်ခစျြတဲ့သူကလူတစ်ဦးမျက်နှာပြင်မှတဆင့်သူ့ကိုစောင့်ကြည့်လိုကငျြ့သုံးသောသူနှစ်ဦးစလုံးသူတို့နှင့်အတူအပြန်အလှန်ရန်အသုံးပြုနေပါတယ်။
အဘယ်သို့ငါငါ့ခမည်းတော်သည်ငါ့ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်လိင်ဗီဒီယိုကြည့်တွေ့ရှိခဲ့? အလွန်လွယ်ကူပါတယ်, အစဉ်မပြတ်ငါကသူတို့ကိုလိမ်လည်လှည့သို့မဟုတ်လုံခြုံမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုစာမကျြနှာသို့ပြီကြောက်လန့်, သူတို့ကရယူသောအရာကိုစာမျက်နှာများကိုသိရန်အကြှနျုပျအဘ, ငါ့အမိ၏ browsing history gossiping ။
ငါအနာဂတ်သားစဉ်မြေးဆက်အဘို့, ဥပမာ, Centennial, အ Z ကိုမျိုးဆက်ကျောင်းသားများ, မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ Y ကိုနှင့်အနှစ်တစ်ထောင်, ရိုးရှင်းတဲ့နိုင်ပါတယ်ရှာဖွေတွေ့ရှိထားကြောင်းမရှိဘဲအင်တာနက်ပေါ်ရှိကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူဆိုဒ်များ browse ကိုငါသိ၏။ ဒါပေမယ့်ငါ့အဘသည်, ထိုကလေး Boomers နဲ့တူသားစဉ်မြေးဆက်အဘို့, တကနည်းနည်းပိုရှုပ်ထွေးနေပေမည်။ porn ကိုကြည့်သို့မဟုတ်စောင့်အရှောက်၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုတောင်းဆိုရန်စာမျက်နှာများကိုသွားရောက်လည်ပတ်ဖမ်းမိထားကြောင်းပြဿနာတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်သူတို့ကနက်ရှိုင်းသော Web ကိုမခေါ်အဘယျသို့ဝင်လျှင်ဖြစ်လိမ့်မယ်, ငါမဟုတ်ဘဲငါ့ခမည်းတော်နှင့်ငါ၏မိခင် sluts စာမျက်နှာများကိုကြည့်ရှုသည်ကိုသင်တို့သိချင်ပါတယ်။
ဤသူကားငါ၏အဘ၏အိမ်တွင်ဖြစ်ပါသည်, တစ်နည်းနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာပိုပြီးအလည်အပတ်ခရီးနေသောစာမျက်နှာများကိုကြည့်ရှုနိုင်မနားလည်သဘောပေါက်ကြပါဘူး။ သငျသညျကိုအနီးကပ်မကြည့်ရှုပါလျှင်သင်သည်အဘယ်သို့သင်၏ browser ၏ပင်မစာမျက်နှာတွင် fixed နေကြသည်စာမျက်နှာများ, သို့မဟုတ်သင့်ဇနီးတို့, သင်တို့သည်အင်တာနက်ကိုပြည်တန်ဆာမှတဆင့်န်ဆောင်မှုကိုရှာသောသူတို့သိစေခြင်းငှါပြုနေကြသည်။
ဤသည်ငါ့ကိုသို့ရာတွင်၏စုံတွဲတစ်တွဲကိုမှတ်မိစေတော်မူပြီ။ ကျွန်မမိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့်အတူပထမဦးဆုံးအဖြစ်ပျက်ငါငါ့အလိုရှိသမျှဒေတာကိုသုံးခဲ့ကြစဉ်ကတည်းကသူသည်သင်၏မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့်ငါ့ကိုတစ်ဦးအဝတ်အစားတံဆိပ်၏စာမျက်နှာအရနိုင်မည်ဆိုပါက, ငါသည် (ကျနော်မိုဘိုင်းမှစှဲတယ်, ငါသိ၏) ဟုမေး၏။ အကြှနျုပျ၏အံ့အားသင့်ရုံဘရောက်ဇာကိုဖွင့်လှစ်ကြောင်း, သင်တို့သည်ငါ၏မိတ်ဆွေတစ်သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့သောပြီးခဲ့သည့်စာမျက်နှာတစ်ခုကညစ်ညမ်းဗီဒီယိုအားခဲ့ပါတယ် စအိုလိင်ဆက်ဆံ သူ့ကိုငါမှာအနည်းငယ်ရှာဖွေနေကူညီနိုင်ဘူး။
ဒုတိယဇာတ်လမ်းငါ၏အယခင်အလုပ်အတွက်ဖြစ်ပျက်ကျွန်မအတန်းဖော်တစ်ဦး၏စားပွဲသို့ သွား. ငါစာမကျြနှာကိုမွငျလြှငျတစျနေ့တှငျအထူးသတစ်ဝက်အဝတ်အချည်းစည်းမိန်းကလေးများဓါတ်ပုံတွေကိုကြည့်ခဲ့ဘာစီလိုနာပွင့်လင်းအတွက်အစောင့်အကြပ်အေဂျင်စီရှိခဲ့သည်။ ဤတွင်ကျွန်မလက်ထပ်ခဲ့မူသောငါ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးအကျိုးအပြစ်ကိုခံရမည် putero ခဲ့ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ငါလက်ရှိငါ၏အအလုပ်သင်စျေးကွက်လုပ်နေတာပေါ့သည်အဘယ်မှာရှိသောအရာ whorehouse, ရှာဖွေတွေ့ရှိကြောင်းကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ apricot နှင့်နှင့်မှားယွင်းနှင့်အတူငါ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိစ္စရှိတယ်စတင်ခဲ့သည်။
ဒါဟာ porn ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်ဖက်ရှင်ဖျော်ဖြေရေးဖြစ်လာသည်မလျှို့ဝှက်ချက်ကိုဖွင့်, စ, တိုး, ယောက်ျားသွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းငှါလာကြခြင်းနှင့် bordellos သာ. ကြီးမြတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျြောအပါးရှာကြံ။
သငျသညျအရမ်းစပ်စုမိပါတယ်သိကြသည့်အတိုင်း, ငါကသက်သေပြအချို့စာရင်းဇယား share:
စပိန်ယောက်ျား၏ 15% (2.5 သန်း) အလည်အပတ်ခရီးတန်ဆာ။
စာမျက်နှာများအရွယ်ရောက်ပြီးသူဖျော်ဖြေရေးစားသုံးမှု Netflix, Amazon နဲ့ Twitter ကိုအသီးအသီးတစ်လပေါင်းစပ်ပိုပြီးပုံမှန်အသွားအလာလက်ခံရရှိသည်။
Pornhub အရေးကြီးဆုံးအရွယ်ရောက်ပြီးသူကဗီဒီယိုက်ဘ်ဆိုက်များ၏တစ်ဦးတည်းသာ, သန်း 100 ကျော်နေ့စဉ်အသုံးပြုသူများကို connect လုပ်ထားကြပါတယ်။ သငျသညျအတူတူအားလုံးပလက်ဖောင်းအရွယ်ရောက်အကြောင်းအရာ generate ရအသွားအလာဆိုပါစို့။
33% ကွန်ပျူတာတစ်ခုဖြင့်အဲဒီလိုအနေဖြင့်စပိန်မှာတော့ Pornhub ဝင်အများဆုံးသုံးစွဲသူများမိုဘိုင်းဖုန်းမှ (64%) ကနေဝင်ရောက်။
5 မိုဘိုင်းအရွယ်ရောက်အကြောင်းအရာကိုလောင်နေသည်ထဲက3။
နေ့တိုင်းကျွန်တော်အင်တာနက်ကိုချိတ်ဆက်ကြသည်ကိုသင်ပြောပြရန်မလိုအပ်ဘဲနှင့်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စမတ်ဖုန်းများ။ ယနေ့ငါတွင်ကျယ်စွာစောင့်အရှောက်သို့မဟုတ် porn ဆိုဒ်များaccedéisစဉ်ထောက်လှမ်းရှောင်ရှားရန်အချို့သောအကြံပေးချက်များပေးချင်ဒါကြောင့်ပါပဲ။
အင်တာနက်ပေါ်ရှိစာမျက်နှာများကိုစောင့်အရှောက်သို့မဟုတ် porn ကိုရယူသုံးဘို့သိကောင်းစရာများ
သင်ပြုရန်ရှိသည်ကိုပထမဦးဆုံးနှင့်အများဆုံးမရှိမဖြစ်စိတ်မကောင်းထက်ပိုကောင်းတဲ့လုံခြုံ, သင့်အီလက်ထရောနစ်ကိရိယာများ၏ကင်မရာ plug ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ဦးကကင်မရာဖုန်းကို hack လိမ့်မယ်ဆိုပါစို့ သင် masturbating နေစဉ် အချိန်မှာလိင်ဗီဒီယိုနှင့်စောင့်ကြည့်။
ကွဲပြားခြားနားသော web browsers တွေသင့်ပြတင်းပေါက် cookies နဲ့ browsing history ကိုလည်းဖျက်ပစ်ပါလိမ့်မည်ပိတ်လိုက်သည့်အခါဤအလမ်းအတွက်, သင်အမည်ဝှက်ကိုရယူရန်ခွင့်ပြုပါ။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ရှာဖွေရေးဦးစားပေးဆကျသှယျဖို့မလည်းအရေးကြီးပါတယ်, ဒါပြီးရင်ဗီဒီယိုများနှင့်သင်သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ကြဆက်စပ်အကြောင်းအရာစာမျက်နှာများကိုပြသလင့်များသို့မဟုတ်နဖူးစည်းစာတမ်းတွေပေးပို့မည်မဟုတ်ပါ။ သငျသညျလျော့နည်းထိတွေ့လာရှိလိမ့်မည်။
ဒါဟာလုံလုံခြုံခြုံနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရသောစာမျက်နှာများကိုဝင်ရောက်ဖို့အမြဲအကြံပြုလိုတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်ပိုကောင်းညစ်ညမ်းဗီဒီယိုအားတွင်ကျယ်စွာ, သွားရောက်လည်ပတ်လျှင်သူတို့ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန် streaming ကြည့်ဖို့။
တခါတလေအင်တာနက်ဖိုရမ်တစ်ခုပေါ်တွင်သင်တစ်ဦးတည်းနေသည့်အခါသင်၏မယားအင်တာနက်ပေါ်ရှိကြောင်းရှုမြင် porn sites များတွေ့ရှိဘယ်မှာများနှင့်ရှယ်ယာကျော်အခြေအနေများကြောင့်ပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ သငျသညျငါသညျဤနံနက်တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းအမှန်တကယ်အမှုတွေ့နိုင်ပါသည်။
ငါနေဆဲအကောင့်သို့ထိုကဲ့သို့သောများစွာသောအခြားအမှုအရာတို့တွင်တစ်ဦး VPN ကို install လုပ်အဖြစ်ကိုပိုမိုရှုထောင့်ကိုယူသင့်ပါတယ်သတိထားမိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ငါကအနည်းဆုံးသင်၏မယားနှင့်မိတ်ဆွေများအဘို့ဖမ်းမိမရကြဘူး, တစ်ဦးရိုးရှင်းသောအတွက်ရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။ ငါသည်လည်းမိုဘိုင်းမှတစ်ဆင့်ပိုကောင်း access ကို, သင်ရုပ်ဖျက်utilicéisပေမယ့်သူတို့ကသင့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုများကိုခြေရာခံစေခြင်းငှါ, ကုမ္ပဏီ၏ကွန်ပျူတာကနေစောင့်အရှောက်သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏accedéisစာမျက်နှာများလျှင်သင်လျစ်လျူရှုမရနိုငျသောအလွန်အရေးကြီးသောအသှငျအပွငျကိုမီးမောင်းထိုးပြချင် ကွန်ယက်နဲ့ချိတ်ဆက်လျက်ရှိခြင်းမရှိဘဲ။
ဖော်ပြခဲ့တဲ့ကြောင့် cookies တွေကိုသို့မဟုတ် cache ကိုတဆင့်ခြင်းမရှိသဲလွန်စချန်ထားရန်အရုပ်ဖျက် browser ကိုသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိက mode ကိုမှတဆင့်အင်တာနက်ကိုဝင်ရောက်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ Google က Chrome, Safari, Firefox, သို့မဟုတ် Internet Explorer ကို Microsoft က Edge ကောင်းတစ်ဦးရွေးချယ်မှုဖြစ်ကြသည်။
သငျသညျရုပ်ဖျက် Browser ကနေတစ်ဆင့်အင်တာနက်ကိုမှတ်မိကြဘူးလျှင်မူကား, ငါသည်အသင်တို့၏ဖုန်းသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာကနေရှာဖွေရေးသမိုင်းကိုဖျက်ပစ်နိုင်ပါတယ်သင်မည်သို့ပြောပြလိမ့်မယ်ဒီမှာစိတ်ပူစရာမလိုပါ။ အကယ်စင်စစ်သင်သည်များစွာသောပြီးသားကမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုသိပေမယ့်အမြဲရှာဖွေတွေ့ရှိခံရဖို့ထိတွေ့ငါ့ခမည်းတော်နှင့်အဘယ်သူတူ, လူတို့အဘို့, ဒီမှာဖြေရှင်းချက်ပါပဲ။
သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်မှာသင့်ရဲ့ browser ကိုသမိုင်းကိုဖျက်ပစ်ရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
Google Chrome ကိုခုနှစ်တွင်
သုံးမှတ် icon ကိုသွားပါ။
သမိုင်း (clock icon ကို) ကိုဝင်ရောက်။
အဆိုပါ Delete button ကိုနှိပ်ပါ။
စင်ကြယ်သော browsing history ။
သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သမိုင်း browsing ပယ်ဖျက်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
browser ကိုဖွင့်လှစ်မှုနှင့်အတူသုံးယောက်ရမှတ် (တည်ရှိသောညာဘက်ထိပ်) ၏အိုင်ကွန်ကိုသွားပါ။
သမိုင်းကို Select လုပ်ပါနှင့်သမိုင်း reselect ။
အဆိုပါ OK ကိုခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
(ထိပ် menu ပေါ်တွင်) သမိုင်း option ကိုသွားပါ။
(ညာဘက်ထိပ်မှာတည်ရှိပါတယ်)4အလျားလိုက်ဘားပေါ်လာရှိရာအိုင်ကွန်ကိုသွားပါ။
Show ကိုသမိုင်းသို့မဟုတ် Clear Recent History ကိုရွေးချယ်ပါ။
အခုတော့ခလုတ်ကို Clear ကိုနှိပ်ပါ။
အဆိုပါ Tools များ button ကိုရွေးချယ်ပါ။
Browsing History ကိုဖျက်ပစ်ပါရွေးချယ်ပါ။
ငါရှာဖွေတွေ့ရှိထားကြောင်းမပါဘဲ porn sites များနှင့်လက်လှမ်းစောင့်အရှောက်စာမျက်နှာများမှာကြည့်ရှုနိုင်ပုံကိုငါ့ခမည်းတော်ပြသတဲ့အခါမှာသူကရှိပြီးသားဘယ်သူအားမျှမကသူစောင့်ကြည့်ခဲ့သည်ကိုသိထင်ပေမယ့်ငါတစ်ကမ်ဘာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ယခု မှစ. ပေါ် , သင်တို့အားငါရှာအံ့သောငှါလာသောအခါမျှော်လင့် ဘာစီလိုနာအတွက်အကောင်းဆုံးစောင့်အရှောက် အွန်လိုင်းကိုမဆိုလိင်ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုသို့မဟုတ်သင်တို့သည်, ပျော်မွေ့ သူက ရှာဖွေတွေ့ရှိခံရကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲ။ သင့်ရဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးစိတ်ငါ၏ငြိမ်သက်ခြင်းဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့သတိရယခုအမြဲရုပ်ဖျက်မှ, သင်တို့သည်များစွာသောပြစ်တင်ကြိမ်းမောင်းစကားနှမြော။